के हो परमाणु पनडुब्बी ? कुन देशसँग छ सबैभन्दा बढि ? « Sansar News
के हो परमाणु पनडुब्बी ? कुन देशसँग छ सबैभन्दा बढि ?
५ आश्विन २०७८, मंगलवार १४:२३
काठमाडौं । अहिले अष्ट्रेलिया सरकारले ब्रिटेन र अमेरिकासँग गरेको एक सम्झौताको चर्चा विश्वभरि भईरहेको छ । ओकास नाम दिइएको उक्त सम्झौताको समर्थन र विरोधमा शक्तिशाली देशहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । कतिपय शक्तिशाली देशहरुले उक्त सम्झौतालाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने पनि बताईरहेका छन् ।
सम्झौताअनुसार अमेरिका र बेलायतले परमाणु ऊर्जासँग सुसज्जित पनडुब्बी बनाउन अष्ट्रेलियालाई सहयोग गर्नेछन् । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण हुने पनडुब्बीबाट अष्ट्रेलियाले आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा र निगरानी गर्नेछ ।
‘परमाणु युग’को शुरुवातसँगै, परमाणुबाट संचालित पनडुब्बीहरुमा अनुसन्धानको काम सन् १९४० को दशकदेखि शुरू भएको थियो । तत्कालिन समयदेखि केवल ६ देशहरुले मात्रै परमाणु ऊर्जासँग सुसज्जित पनडुब्बीहरुको निर्माण गरि प्रयोगमा ल्याएका थिए ।
अहिले अमेरिकासहित रुस, बेलायत, फ्रान्स,चीन र भारतले यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छन्। पछिल्लो समय अमेरिका र बेलायतको सहयोगमा अष्ट्रेलिया पनि पनडुब्बी बनाउने तर्फ देखिएको छ ।
के हो परमाणु पनडुब्बी ?
हामीले बुझ्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो कि परमाणु शक्तिसँग सुसज्जित एक पनडुब्बीको मतलब परमाणु हतियार भने होइन् । माथिबाट उनीहरु सामान्य पनडुब्बीहरु जस्तै देखिन्छन्। तर मुख्य भिन्नता उर्जा हो । उनीहरु परमाणुहरुको विखण्डनबाट प्राप्त हुने उर्जाबाट सञ्चालन हुन्छन् ।
अन्य उर्जाको स्रोतबाट भन्दा परमाणुको विखण्डनबाट बढी उर्जा प्राप्त हुने गर्दछ । पनडुब्बीमा परमाणु उर्जाको प्रयोग विद्युत उत्पादन र टर्बाईनहरु चलाउनका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ ।
परमाणु पनडुब्बीको फाईदा
परमाणु उर्जाबाट संचालित पनडुब्बीहरूको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि उनीहरुलाई ईन्धनको आवश्यकता नै पर्दैन। जब एक परमाणु पनडुब्बी ड्यूटीमा जान्छ, त्यहाँ ईन्धनको रूपमा यूरेनियमको एक मात्रा मात्रै प्रयोग गरिन्छ । जसले ३० वर्षसम्म उर्जा दिन सक्छ ।
परम्परागत उर्जाबाट संचालित पनडुब्बीहरुको तुलनामा, परमाणु उर्जाबाट सञ्चालित पनडुब्बीहरु लामो समयको लागी उच्च गतिमा काम गर्न सक्छन्। साथै परम्परागत इन्जिनको विपरीत यो पनडुब्बीमा हावाको आवश्यकता पर्दैन ।
यो परमाणु पनडुब्बी तयार गर्न अरबौं डलर खर्च लाग्दछ । साथै परमाणु विज्ञानका निकै अनुभवी र जानकार मान्छेद्धारा मात्रै बनाउन सकिन्छ । अष्ट्रेलियाले आफ्ना विश्वविद्यालयहरु लामाे समयदेखि नै परमाणु विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयहरुमा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउँदै आएकाे छ । उसले आफुँसँगै पनडुब्बी निर्माणका लागि जनशक्ति भएकाे बताइरहेकाे छ ।
यस बाहेक ब्रिटेन र अमेरिकासँग सम्झौताको कारण आफ्नो अनुभवको लाभ पनि प्राप्त गर्नेछन्। यद्यपि यो अझै पनी स्पष्ट छैन कि अष्ट्रेलियाको लागी बनाइने परमाणु पनडुब्बीहरुको लागी ईन्धन कहाँबाट आउनेछ ।
कुन देशसँग कस्तो पनडुब्बी छ ?
अमेरिकासँग जम्मा ६८ पनडुब्बी छ । जसमध्ये १४ पनडुब्बी न्यूक्लियर पावरबाट सञ्चालित हुने खालका छन् । रुससँग २९ पनडुब्बी छ । जसमध्ये ११ पनडुब्बी न्यूक्लियर पावरबाट सञ्चालित हुने खालका छन् ।
त्यस्तै चीनसँग १२ पनडुब्बी छन् । जसमध्ये ६ पनडुब्बी न्यूक्लियर पावरबाट सञ्चालित हुने खालका छन् । बेलायतसँग ११ पनडुब्बी छन् । जसमध्ये ४ पनडुब्बी मात्रै न्यूक्लियर पावरबाट सञ्चालित हुने खालका छन् ।
फ्रान्ससँग ८ पनडुब्बी छन् । हाल फ्रान्ससँग ४ पनडुब्बी मात्रै न्यूक्लियरबाट सञ्चालित हुने खालका छन् । भारतसँग हाल एउटा मात्रै पनडुब्बी छ । तर उक्त पनडुब्बी भने न्यूक्लियरबाट सञ्चालिन हुने खालको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा